Hi Lo Mpiloka | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Hi Lo Mpiloka | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Hi Lo Mpiloka
Blackjack no tena malaza mahazatra Casino latabatra ara lalao ary maro ireo variants izany aterineto amin'ny lafiny hafa Bet lafin-javatra sy Hi Mpiloka iray Lo-telefaonina toy izany trano filokana ambony lalao. Io dikan tsy maintsy hanome tanana dia afaka ny miloka amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny Bet isan-tanana izay mampitombo ny vintana ny handresy bebe kokoa. Afaka mahita ny kalitao avo latabatra teo matihanina amin'ny miravaka ny karatra, poti, ary scoreboard ny manara-maso ny toe-. Misy hira mahafinaritra orkesitra milalao eo aoriana mba hisaina tsara foana ny mandaka sy velona ao amin'ny lalao. Ny hilokana fetra ho an'ny lehibe sy ny lafiny lalao dia £ 1 min sy Max ny £ 500 isan-tanana.
Momba ny developer ny Hi Lo Mpiloka :
Ny developer dia NYX (zava-misy) Ary raha manoro hevitra ny anarany dia manatitra zava-misy lalao traikefa amin'ny rehetra ny Casino lalao. Amin'ny lohahevitra sy ny zava-baovao mahagaga endri-javatra ao amin'ny trano filokana finday ambony lalao sokajy, efa nahavita hametraka ny tenany teo ambony fandaharana lalao mpandraharaha eto amin'izao tontolo izao.
Izany finday trano filokana ambony lalao manaraka fitsipika sy ny lalàna fototra ny mahazatra blackjack lalao izay ny tanjona dia ny nikapoka ny mpivarotra amin'ny alalan'ny mahazo 21 teboka na ny akaiky indrindra ho azy isa. Tadidio fa raha mihoatra 21 hevitra, hanana izany ianao tanana sy ny Toy izany koa ny tanana hafa rehetra. Manana ny safidy mba hametraka ny filokana amin'ny isaina-tanana avy amin'ny iray ka hatramin'ny dimy ary toy izany koa ny lafiny Bet lalao izay atao hoe 'Hi Lo'. Eto dia tsy maintsy hifidy na Hi na Lo, izay afaka handresy amin'ny avo raha fiara faharoa dia ny lanjany ambony kokoa noho ny teo, ary mba handresy amin'ny indro ny faharoa tsy maintsy manana soatoavina kely noho ny voalohany.
Game Préférences: Misy toe-javatra sasany lalao ilaina ao amin'ity trano filokana finday ambony lalao toy ny manova ny lokon'ny lohahevitry ny latabatra sy ny fanitsiana boky ho an'ny mozika, feo vokatry, & ny mpivarotra ny feon'ny. Azonao atao ihany koa ny manampy na mankarary fiantohana avy hatrany, na dia vola, lalao fampitandremana, mitsangana fiara sy ny fanesorana bust karatra.
Automatic Stand: Io no endri-javatra mahasoa iray raha te tananao avy hatrany hijoro eo an mafy 17, 18, 19 na 20 ary koa amin'ny malefaka 19 & 20. Nitsangana teo amin'ny isa ireo dia matetika kevitra mba tsy mahazo ny bust.
Payout: Nikapoka ny tanan'i mpivarotra dia handoa anao 100% ny Bet vola, fiantohana mandoa 150% ary blackjack Fandresena vola anao 250% ny Bet vola.
famintinana: Izany finday trano filokana ambony lalao dia tena mampiankin-doha amin'ny lafiny lalao Bet endri-javatra mba hampitombo ny fahafaha mba handresena ao. Ny endri-javatra sy ny safidy tena miavaka izay mahatonga ity lalao iray amin'ireo malaza indrindra variants ny blackjack.